ချစ်​လို့ကိုက်​တာပါဆို။ - For her Myanmar
ချစ်၍ကိုက်မိ အပြစ်ရှိ 🙁 တကယ်တော့ ကိုက်တယ်ဆိုတာ မုန်းလို့မှမဟုတ်ဘဲနော်.. ချစ်လွန်းလို့ဖြစ်သွားတာပါဆို 😛
ယောင်းတို့ရော ဖြစ်​ဖူးကြတယ်​မလား .. ဝဝတုတ်​တုတ်​ က​လေးပိစိ​လေး​တွေမြင်​ရင်​ ကိုက်​ချင်​လာတာတို့၊ ​ပျော့​ပျော့အိအိ နဲ့ လုံးလုံးတစ်​တစ်​အရာမျိုး​တွေ​တွေ့ရင်​ သွားယားပြီး ဟိုကိုက်​ဒီကိုက်​လုပ်ချင်​လာတာတို့။
လူတစ်​​ယောက်​က​နေ တခြားလူတစ်​​ယောက်​ကို ကိုက်​ချင်​ဖဲ့ချင်​စိတ်​​ပေါ်လာ တာမျိုးက ဖုတ်​​ကောင်​ (Zombie) ​တွေလို “အသား​တွေကို ကိုက်​ဖဲ့စား​သောက်​ချင်​စိတ်​” ဖြစ်သလိုမျိုး​တော့ မကြမ်းတမ်းတတ်​​ပေမယ့် တစ်​ခါတလေ​တော့ ကိုယ်​က ချစ်​စနိုးနဲ့ သွားနဲ့ခဲလိုက်​တယ်​ဆို​ပေမယ့် တခြားသူအတွက်​ နာကျင်​စရာဖြစ်​သွားတာမျိုး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။ တကယ်​က​တော့ အသည်းယားဖို့​ကောင်းလို့ ကိုက်​မိတာမျိုး၊ ​နောက်​ပြီး ကိုယ်​ချစ်​ခင်​သဘောကျရတဲ့သူ​တွေကို သွားနဲ့ တတိတိလိုက်​ကိုက်​တတ်​တာမျိုးက ဖြစ်​​လေ့ဖြစ်​ထရှိတတ်​တာမျိုးပါပဲ။ တစ်​ခါတစ်​ခါ​တော့လည်း သူများကို လိုက်​ကိုက်​တတ်​တဲ့အကျင့်ရှိသူတွေဟာ “​ခွေးစိတ်​​ပေါက်​​နေတာလား” လို့လည်း အ​မေးခံရတတ်​ပါတယ်​။ ဒီ​တော့ ကိုက်​တတ်​တဲ့သူ​တွေရဲ့ အမူအကျင့်​​လေး​တွေနဲ့ သူတို့ဘာလို့ကိုက်​ကြတာလဲသိရ​အောင်​ ဒီ​ဆောင်းပါး​လေးနဲ့ ​​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော် ​။
အသည်းယားလွန်းလို့ ဒါမှမဟုတ်​ ချစ်​စရာ​ကောင်းလွန်းလို့ ကိုက်​ချင်​ဖဲ့ချင်​စိတ်​​ ​​​ပေါ်လာတာကို သိပ္ပံပညာရှင်​​တွေက​တော့ Cute Aggression (ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့အရာ​တွေေ ကြာင့်​ စိတ်​ရိုင်းဝင်​ခြင်း သို့မဟုတ်​ ရန်​လိုခြင်း) လို့ ​ခေါ်ကြပါတယ်​။ နီတာရဲ က​လေး​​လေးတွေရဲ့ ပါး​ဖောင်း​ဖောင်း​လေး​တွေကို မြင်​တဲ့အခါ အတင်းဖက်​နမ်းပစ်​ချင်​တယ်​၊ ဖျစ်​ညှစ်​ပစ်​ချင်​တယ်​၊ ကိုက်​ပစ်​ချင်​တယ်​ ဒီလိုစိတ်​မျိုး​ပေါ်လာတာက cute aggression လို့​ခေါ်တဲ့ ရန်​လိုမှု​ကြောင့်​ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​တဲ့။ နာကျင်​​စေလိုတဲ့ရည်​ရွယ်​ချက်​မျိုးမရှိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းယားတဲ့စိတ်​ပြေေ​ပျာက်ေ​အာင်​ ​ပြုမူမိတဲ့ အပြုအမူတစ်​ခုသာဖြစ်​ပါတယ်​။
Related Article >>> ကလေးငယ်တွေကို အချစ်တော်တိရိစ္ဆာန်မွေးခွင့် ပေးလိုက်ပါ
ချစ်​စရာ​ကောင်းလွန်းတဲ့ အရာမျိုး​တွေ့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ်​ စိတ်​ထဲမှာ ချစ်​စရာ​ကောင်းလွန်းတယ်​၊ အသည်းယားစရာ​ကောင်းတယ်​လို့ ခံစားမိတဲ့အခါမျိုးမှာ ဦး​နှောက်​လှိုင်း​တွေက က​မောက်​ကမဖြစ်​သွားပြီး ရှုပ်​ယှက်​ခတ်​ကုန်​တတ်​ပါတယ်​။ ဒီလိုလှုံ့​ဆော်​မှု​ကိုတားဆီးဖို့  အလိုအ​လျောက်​တုံ့ပြန်​​မှုတစ်​ခုအ​နေနဲ့ ကိုက်​ဖဲ့တာတို့၊ ဆွဲဆိတ်​တာတို့ဆိုတာ လုပ်​မိတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​​ ​ယောင်းတို့​ရေ။ ဥပမာ – ကိုယ့်​ချစ်​သူရည်းစားက သိပ်​ပြီးချစ်​ဖို့​ကောင်းေ နတဲ့အခါမျိုး၊ စိတ်​ထဲမှာ သူ အရမ်းချစ်​ဖို့​ကောင်းတယ်​လို့  ​တွေးမိတဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့ရဲ့ နားရွက်​​တွေ၊ လက်​​ချောင်း​တွေကို ကိုက်​မိတာမျိုး၊ ပါးနှစ်​ဖက်​ကိုဆွဲညှစ်​တာမျိုး ​တွေ လုပ်တတ်​ကြတာမျိုးပါ။ ဒါ​ကြောင့်​လည်း “အသည်းယားလွန်းလို့ ကိုက်​စားပစ်​ချင်​တယ်​” တို့၊ “ဝါးစားပစ်​ချင်​စရာ​လေး” တို့ အသုံးအနှုန်း​တွေဆိုတာ ​ပေါ်​ပေါက်​လာတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီလိုကိုက်​တဲ့​နေရာမှာလည်း တစ်​ချို့က ဖွဖွ​လေး သွားနဲ့ထိရုံ​လောက်​သာ ကိုက်​ကြ​​ပေမယ့်​ တ​ချို့အရမ်းအသည်းယားတတ်​တဲ့ သူ​တွေကျတော့ ကိုက်​ပြီလားဆို သွားရာအကွင်းလိုက်​ဖြစ်​သွားမှ အာသာ​ပြေတတ်​သူ​တွေလည်းရှိပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ဘယ်​လိုပဲကိုက်​ကိုက်​ ချစ်​လို့ကိုက်​ပါတယ်​ဆိုမှ​တော့ အကိုက်​ခံရတဲ့သူ အနာတရဖြစ်​​လောက်​​အောင်​ ကျီစားတာမျိုးက​တော့ ​မဖြစ်​သင့်​ပါဘူး​နော်​။
ကဲ .. ​ယောင်းတို့​ရေ .. ကိုက်​တတ်​တဲ့အကျင့်များရှိနေလား။ ကိုယ်​က ခဏခဏလိုက်​ကိုက်​​နေလို့ဆိုပြီး မ​ကျေမနပ်​ ပွစိပွစိလုပ်​​နေတဲ့ ဘဲဘဲ​တွေရှိတယ်​ဆိုရင်​ .. ကိုက်​တယ်​ဆိုတာ တကယ်​​တော့ ကိုယ်​ချစ်​တဲ့သူ​တွေကိုပဲ ​အသည်းယားလွန်းလို့ ကိုက်​မိတာဖြစ်​တဲ့အ​ကြောင်းနဲ့  ဘာလို့ကိုက်​ရတာလဲဆိုတဲ့​ကြောင်းရင်းကို ​သေ​သေချာချာရှင်းပြ​ပေးလိုက်​​နော်​။ အများကြီးချစ်​ရင်​ အများကြီးကိုက်​တာမို့ ခုလည်းကိုက်​တဲ့အပြင်​ ​နောင်​ကိုလည်း အများကြီးဆက်​ကိုက်​ဖုိ့ရှိ​သေး​ကြောင်း​ပြောပြီး ကိုကို​တွေ ​မောင်​​မောင်​​တွေရဲ့ ချစ်​ခင်​နားလည်​​ပေးမှုကို ရရှိနိုင်​ကြပါ​စေလို့လည်း ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော် ​။
အားလုံးပဲ ​ဆက်​ကိုက်​ .. အဲ​လေ .. ​ပျော်​ရွှင်​ကြပါ​စေလို့။
Nandar ( For Her Myanmar )
Nandar November 16, 2017
ယောငျးတို့ Email မှာသုံးနတေဲ့ @ သင်ျကတေ ကို ဘယျသူဖနျတီးခဲ့လညျးဆိုတာသိပါသလား
Phyu Thant September 22, 2019
လက်ထပ်တော့မယ့် ချစ်သူ မောင်နှံတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅)ချက်
Wathun August 5, 2019
Khine July 5, 2019
အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ ဝက်တုပ်ကွေးကို ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြမလဲ
Aye Mon Kyaw June 20, 2019
ကလေးတှကေို လိငျပညာပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျမယျ့ အကြိုးကြေးဇူး(၅)ခု
Yin Sandi Ko June 6, 2019
အောင်စာရင်းထွက်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ တက္ကသိုလ်မတက်ခင်အချိန်ကြားမှာ အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုသုံးမလဲ?
Wathun June 5, 2019
More about Silk-n Shine
ရာသီလာခြိနျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ ကောငျးလား?
ရာသီလာခြိနျ ရခြေိုးခေါငျးလြှျောရငျ ရာသီခြုပျတတျလား ?
ရာသီသှေးဆငျးရငျ အမြားကွီးဆငျးတာမှ ပုံမှနျလား? နညျနညျးဆငျးတာမှ ပုံမှနျလား?
ရာသီလာတဲ့အခြိနျ လိငျဆကျဆံရငျ ကိုယျဝနျရနိုငျခရြှေိလား?